Umdlalo weSixeko weSkate uyafumaneka kwiApple Arcade ehlaziyiweyo ukubhiyozela iiOlimpiki zaseTokyo | IPhone iindaba
Nge-23 kaJulayi, iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo ka-2020 izakuqala, uhlelo oluthi ngenxa yobhubhane luye lwalibaziseka ngonyaka, njenge-Eurocup kunye neNdebe yeMelika. Kuhlelo olutsha lwale midlalo, zongezwa Iindlela ezintlanu zemidlalo, phakathi kwayo sifumana i-Skateboarding.
Ukubhiyozela ukuba i-skateboarding iye yaba ngumdlalo weOlimpiki, amakhwenkwe e-Snowman, umyili wezihloko zeAlto's Odyssey kunye neAlto's Adventure, bazokwazisa ngoJulayi 23 a ulwandiso olutsha lomdlalo weSkate City, Umdlalo ofumaneka kuphela ngeApple Arcade.
Olu lwandiso lutsha, izakubandakanya iindawo ezininzi ezidumileyo kunye neendawo ukutyibilika kwiskateboard kwisixeko saseTokyo. Ukongeza, iya kubandakanya imiceli mngeni engama-50, iibhodi eziphambili, iitafile ezintsha, nokunye okuninzi. Umququzeleli we-Snowman, uRyan Cash, wabelane ngazo zonke iindaba eziza kuvela esandleni solu hlaziyo:
Imiceli mngeni emitsha engama-21
Iinjongo ezintsha ezingama-30 kwi-Skate engapheliyo
Ingoma entsha yesandi
Iidesika ezintsha, iimpahla kunye nezixhobo kwivenkile yeSkate ukuvula
Iibhodi zebhodi yabaphambili yamanqaku aphezulu kwimowudi yomceli mngeni
Kule minyaka imbalwa idlulileyo besikhangela indlela enomdla yokudibanisa umsitho wehlabathi lokwenyani kwinto esiyenzayo, kodwa asikaze sifune ukwenza into engenangqondo. Xa imidlalo yeTokyo yabhengezwa, yayingeyonto ilungileyo kuthi. I-Skateboarding izakuthatha inxaxheba kwimidlalo ye-Olimpiki okokuqala ezimbalini, elilixesha lokoyisa kulo mdlalo. Sasisazi ukuba kufuneka sibe yinxalenye yalo ngandlela thile.
Esi sihloko ifumaneka kuphela ngokubhaliswa kweApple Arcade, umrhumo onexabiso le-4,99 euro ngenyanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IPhone imidlalo » Umdlalo weSixeko seSkate ofumaneka kwiApple Arcade uhlaziywa ukubhiyozela iiOlimpiki zaseTokyo
I-Beats Studio Buds entsha ngoku iya kuthengwa eSpain